Farmaajo iyo Rooble oo xaalkoodu isku noqday jiir iyo Bisad | Berberanews.com
Home WARARKA Farmaajo iyo Rooble oo xaalkoodu isku noqday jiir iyo Bisad
Farmaajo iyo Rooble oo xaalkoodu isku noqday jiir iyo Bisad
Muqdisho-(Berberanews)-Madaxweynaha Somalia, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Raysalwasaare Rooble, ayaa ismari-waagooda siyaasadeed wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd abayd.
Todobaadkan ayay ahayd markii Raysal-wasaaruhu xilka ka qaaaday Taliyihii Nabadsugidda Somalia, balse Madaxweynaha ayaa ku gacansaydhay oo diiday tallaabadaas, aakhirkiina u magacaabay xil kale. Iyadoo haatan Hay’adda NISSA leedahay laba agaasime oo ay kala magaabeen Madaxweynaha iyo Raysal-wasaaruhu
Sidoo kale, maanta ayuu Raysal-wasaaruhu xilka ka qaaaday Wasiirkii Amniga Gudaha, waxaannu magacaabay Masuul kale.
haseyeeshee Madaxweynaha, ayaa mar kale soo saaray qoraal uu ku diiday xil-ka-qaadista uu sameeyay Raysalwasaare Rooble, taasoo uu ku sifeeyay sharci darro.
Halkan ka akhriso war-saxaafadeedka ka soo baxay Madaxtoyadda ee Madaxweynuhu ku dedaafeeyay goaanka Raysal-wasaare Rooble.
”Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan dhaqan gal ahayn xil ka qaadis kasta oo lagu sameeyo xubin ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ilaa ay ku timaaddo si waafaqsan Dastuurka KMG ah ee dalka.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay in shaqada laga doonayo haatan xukuumadda ay ahayd inay dhammeystirto doorashooyinka Goleyaasha Barlamaanka ee ka bilowday dalka, lagana sugayo sii joogtaynta hawlaha muhiimka ah ee horyaalla”
Previous article“Hadalka Cirro waa khiyaamo qaran” Wasiir Koore
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilay saraakiisha Baanka Adduunka